रोस्टेड चिकेन विथ सिचुवान सस - परिकार - प्रकाशितः आश्विन २४, २०७८ - नारी
रोस्टेड चिकेन विथ सिचुवान सस
सामग्री : चिकेन २०० ग्राम, लसुन २० ग्राम र अदुवा २० ग्राम, हट सस दुई चम्चा, नुन स्वादअनुसार ।
विधि : चिकेनलाई उम्लिरहेको पानीमा लसुन, अदुवा, सेलरी पत्ता, स्टार मसला, प्याज, गाजर हालेर आठ मिनेटसम्म उमाल्ने । त्यसपछि उक्त चिकेनलाई तेलमा फ्राइ गर्ने र अदुवा तथा लसुनलाई गोल्डेन कलर नआउन्जेल फ्राइ गर्ने । यसमा दुई चम्चा हट सस राखी टिम्मुर, नुन, स्टार मसला, तिलको तेल र नुन स्वादअनुसार लगाएर केही बेर राख्ने । अब यो स्वादिष्ट परिकार तयार भयो । यसलाई मेन डिसका रूपमा सर्भ गर्न सकिन्छ ।
सञ्चालक, माइ च्वाइस रेस्टुरेन्ट
नेपालीहरूमा रेस्टुरेन्ट जाने चलन बढ्नुको कारण के हो ?
पहिलो कारण त व्यस्तता नै हो । दोस्रो, एक्सपोजर तथा फरक स्वाद चाख्ने बानीको विकास । तेस्रो, यो एक किसिमको फेसनजस्तै बन्नु पनि हो ।
कोरोनाकालमा पनि रेस्टुरेन्टमा मान्छे खचाखच देखिन्छन नि ?
फुर्सदमा झन् मान्छेलाई के खाऊँ–खाऊँ, नयाँ स्वाद चाखौं भन्ने कौतूहलता हुन्छ । अर्को कुरा पछिल्लो समय मानिसले तनावबाट टाढा रहने बाटो खोजिरहेका छन् । साथीभाइसँग रेस्टुरेन्ट गयो, खायो, रमाइलो गर्‍यो रिफ्रेस भइन्छ भन्ने मानसिकताले यस्तो समयमा पनि रेस्टुरेन्टमा मानिसको भीड बढेको हुनुपर्छ ।
रेस्टुरेन्टको खाना कत्तिको स्वस्थकर हुन्छ ?
आफैले घरमा पकाएर खाएजस्तो त हुँदैन तर पछिल्लो समय कतिपय रेस्टुरेन्टले अत्यन्तै हाइजिन मेन्टेन गरी खाना सर्भ गर्ने गरेका छन् ।
चाडपर्वमा कस्तो खाना राम्रो हुन्छ ?
चाडपर्वमा सकेसम्म आनै घरको खाना खानु उपयुक्त हुन्छ । आफ्नो शरीर र स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर सन्तुलित आहार–विहार गर्नुपर्छ । चाडपर्व भन्दैमा धेरै मात्रामा खानेकुरा खानु हुँदैन । पर्वका निहुँमा धेरै खानु पनि भएन ।
‘माइ च्वाइस’ को विशेषता के हो ?
मल्टी–कुजिन एकै स्थानमा उपलब्ध हुनु नै ‘माइ च्वाइस’ को विशेषता हो ।